Isofa yeSiseko seBlue Navy
Xa kufikwa kwiisofa, ukhetho olungapheliyo luya kuveliswa engqondweni yakho ngokusekwe kubungakanani babo, isitayile, izinto, ubugcisa, nabanye. Kukho iindlela ezingaphezulu kunokuba ucinga ukuba ujongene neentlobo ezininzi. Nangona kunjalo, Izinto ezintathu ezisisiseko ezigqiba ngesitayile sesofa. Oku kubandakanya iingalo, umva, kunye nemilenze yesofa, nokuba yeyasofa yasekoneni eluhlaza okwesibhakabhaka. Ngaphandle komva, iingalo, isondo, isihlalo, njl, Iinkcazo ezingaphezulu zinikezelwa ukuba zisebenzise malunga nesofa eluhlaza yevelvet velvet .....
Thumela i-imeyile kuthi UQHAGAMSHELWANO NGOKU
Isofa yasekoneni eliLwandle oluBomvu kwiGumbi lokuPhila
Xa kufikwa kwiisofa, ukhetho olungapheliyo luya kuveliswa engqondweni yakho ngokusekwe kubungakanani babo, isitayile, izinto, ubugcisa, nabanye. Kukho iindlela ezingaphezulu kunokuba ucinga ukuba ujongene neentlobo ezininzi. Nangona kunjalo, Izinto ezintathu ezisisiseko ezigqiba ngesitayile sesofa. Oku kubandakanya iingalo, umva, kunye nemilenze yesofa, nokuba yeyasofa yasekoneni eluhlaza okwesibhakabhaka. Ngaphandle komva, iingalo, isondo, isihlalo, njl, Iinkcazo ezingaphezulu zinikezelwa ukuba zisebenzise malunga nesofa eluhlaza yevelvet. Kukho uluhlu olubanzi lweendlela zakudala kunye nezithandwayo, zeendlela ezintlanu ezaziwa kakhulu zisecandelo, olalayo, zemveli, isihlalo sothando, kunye no-chaise.
Uhlobo lwecandelo lusetwe ngeendlela ezininzi. Umzekelo, L-imilo yekona yegumbi, isitayile samacandelo ahlukeneyo kunye neendawo zokuhlala ezahluliweyo zivumela isofa ukuba iphinde ihlelwe ngokusekwe kwinani leendwendwe eziza kutyelela. Uhlobo lwe-2 lokulala olwenziwe ngomsebenzi ophindwe kabini. Ingaba sisihlalo emini, ngokuchaseneyo ebusuku, xa kuthathwa iisofa ibhedi esongiweyo iyaphuma.
Emva koko siza kuthetha ngesona sihlalo sothando sibalulekileyo, isofa yekona eluhlaza okwesibhakabhaka esaziwa kakhulu namhlanje. Ukuthandwa kunokubangelwa yimfuneko yendawo encinci kwigumbi elincinci. Ngaphandle koko, umphezulu wesofa wenziwe ngelaphu le-velvet elityumkileyo elinika lowo usofeni imvakalelo efudumeleyo kunye ethambileyo. Imingxunya ye-plump kunye nokubuyisela umva ukulinganisa ngokugqibeleleyo ngengalo ebunjiweyo, yenza lonke usapho luzalise zonke izinto ezijikeleze intuthuzelo.
Chwetheza: Ifenitshala yeSofa yegumbi lokuhlala; Ihotele Suite; Indawo yokwamkela iindwendwe
Izinto eziphathekayo: Isikhumba; Ilaphu; Imilenze yeArcylicl; Ulwakhiwo lwangaphakathi lomthi; Ukuxinana okuphezulu
Inkangeleko: Kule mihla; Uhlobo lwaseMelika
Igama lemveliso: Isofa yeSiseko seBlue Navy
Inombolo yomzekelo: #1124
Izinto zokumboza: Ilaphu
Umsebenzi: Isofa ejikelezayo yeKona
Ubukhulu(i-CM): 789/413L * 104W * 78 / 86H; Elungiselelweyo Ubungakanani
Ubungakanani bokupakisha(i-CM): 794L * 109W * 83H
Ixesha lokuvelisa: 30-45iintsuku
Imiqathango yoRhwebo: FOB
Ixesha lokuhlawula: T / T., 35% idiphozithi, ukulinganisela ngaphambi kokuziswa
Ukupakisha: Ukupakisha okungaphezulu okuqinileyo
Isiqinisekiso: 2 Iwaranti yeminyaka yesakhiwo sangaphakathi, 1 unyaka we-aniline kunye nofele oluphezulu lweenkozo
Isatifikethi: I-ISO9001; I-SGS;
1~ 3: I-EPE isongele esofeni
4~ 6: Ikhadibhodi enamacala esongelwe ngekhoneni
7~ 8: Iphepha leCarton lisongele esofeni, kubandakanya ezantsi
9~ 12: Uluhlu lwangaphandle olungalukwanga.
A: Sisiseko sokuvelisa iimveliso zokwenza izinto ukususela ngoku 1985.
Q: Uphi umzi-mveliso wakho??
A: SiseShunde, Isixeko saseFoshan, Iphondo laseGuangdong, China
Q: Ithini inkonzo yakho emva kwentengiso?
A: Sinento enye yokulandela umkhondo emva kwentengiso. Ukuba kukho nawuphi na umonakalo ovela kwezothutho okanye kumgangatho womgangatho, Siza kufumana isisombululo kwaye sikunike ingxelo.
A: MOQ yethu 40HQ okanye 20GP(Iindleko ezongezelelweyo zinokufaka isicelo), ungaxuba imveliso eyahlukeneyo ukudibanisa i-40HQ okanye i-20GP.
Q: Ngaba imveliso yakho inokuluphumelela uvavanyo lweeprojekthi zehotele?
A: Sinamava atyebileyo kwiiprojekthi zehotele kwaye zonke izinto zinokudlulisa ukumelana nomlilo njenge-CA117, BS5852, BS7177, BS7176, kunye ne-E0 / E1.
Q: Uyintoni umsebenzi wakho ophambili weemveliso?
A: Sivelisa ikakhulu iiSofa, Isoftware, Uxinzelelo, Abaphindi, kunye nezitulo.
Q: Ngaba ndingakhetha umbala?
A: Ewe, sinemibala emininzi esinokukhetha kuyo kwizinto ezahlukeneyo ezinje ngesikhumba se-ngqolowa ephezulu, PVC, KUNGENZEKA, okanye ilaphu.
Q: Leliphi ixesha lokuhambisa?
A: Nje ukuba sifumane idiphozithi, ingathatha malunga neentsuku ezingama-30 ~ 35.
Q: Athini amagama okuhlawula?
A: Imiqathango yentlawulo iya kuba yi-FOB kwi-SHENZHEN port. T / T., 35% idiphozithi, ukulinganisela ngaphambi kokuziswa.
Q: Ngaba unayo isitokhwe seemveliso?
A: Hayi, thina OEM kunye ODM umenzi, Zonke iimveliso zenzelwe abathengi bethu.
Q: Ngaba umzi-mveliso unakho ukubonelela ngesampulu?
A: Singathumela ilaphu okanye isampulu yesikhumba ngqo kuwe. Imveliso ye-ODM kufuneka ihlawuliswe umrhumo wesampulu emva 10 ii-oda ze-pcs ziya kubuyisa umrhumo wesampula.
Q: Yintoni isiqinisekiso seemveliso zakho?
A: Iwaranti yesofa yile 2 iminyaka yolwakhiwo lwangaphakathi, 1 unyaka wesikhumba sangaphandle; Umatrasi 10 iminyaka yolwakhiwo lwangaphakathi.
Isingqengqelo seSikhumba sangoku
Isofa yangoku yeKona yangoku